ဒီခရီးစဉ်လေးကို သွားမယ်သွားမယ်နဲ့တော်တော်နဲ့ကို မရောက်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒီနှစ်တော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာ အနီးကပ်သွားခါနီးကျတော့ ရာသီဥက နှင်းကျပြီးမိုးလဲရွာမယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးစိတ်ပျက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ တော်ပါသေးတယ်လို့ဆိုရမယ် ရာသီဥတုက တရက်တော့သာယာပြီး နောက်နေ့နှင်းမိုးရွာမယ်တဲ့။ တရက်ဆိုလဲတရက်အလျောက်သွားမယ်ဆိုပြီး သွားမယ့် မနက် မိနစ်၂၀ အလိုမှ ကဗျာကယာနဲ့ ရထားလက်မှတ်ဝယ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ ဗင်းနစ်(Venice ) မြို့မှာ ၁၄ရာစုနှစ်အစောပိုင်းလောက်ကတည်းကကျင်းပတဲ့ Carnival ပွဲတော်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် Easter မတိုင်မီ ရက် ၄၀ အလိုမှာ ၁၀ရက်တိတိကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဖော်ဖော်ဝါရီလထဲမှာ ကျရောက်လေ့ရှိပြီးတော့ ဆောင်းရာသီပွဲတော်တစ်ရပ်အနေနဲ့လဲ ခုဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခရီးသွားအများစုကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးပွဲတော်အဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
ဒီမျက်နှာဖုံးတစ်ခုကို ယူရို ၁၀၀ကျော်ကနေ ၃၀၀အထိရှိပါတယ်။
ဒီဝတ်စုံတွေကတော့မရောင်းပါဘူး။ နာရီပိုင်းနဲ့ ငှားတာပါ။ ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ယူရို ၅၀ ပါတဲ့။ ငှားတာကတော့ အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးပေးရတယ်။
နောက်နေ့မှဘဲ ခမ်းနားလှပတဲ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့ ဝတ်စုံတွေဝတ်ထားတဲ့ သူတွေရဲ့ပုံလေးတွေတင်ပေးမယ်နော်... ဆက်ရန်လေးကိုစောင့်မျှော်အားပေးနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
(ခုတလော စာရေးချင်စိတ်သိပ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ် ... အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်ကိုမရှိဘူးဖြစ်နေတာပါ... နားလည်ပေးကြပါ)
လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ အစ်ကိုမောင်နှမအားလုံးကိုချစ်ခင်လေးစား ကျေးဇူးတင်လျက်.........
Posted by ♠ 10 comments:
Posted by ♠5comments:
ကိုယ်ခုတလော အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်နဲ့ ဘလော့မဂင်းနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ထားတာတော့ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့်စာရေးရမှာပျင်းနေတာနဲ့ ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်ဘူး။
နောက်တော့ ကိုယ့်အီးမေးလ်ကို ပတ်စ်ဝေါ့ဒ်ပြောင်းလိုက်တာ ပြန်လဲဖွင့်ကော recovery လုပ်ထားတုန်းက ကုဒ်နံပါတ်တောင်းတာနဲ့ ထည့်လိုက်တော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ မှားနေပါတယ်တဲ့ဗျာ။ ဖုန်းနဲ့ ပြန်တောင်းရအောင်လဲ အဲ့ဒီဖုန်းကမရှိတော့ဘူးလေ ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်း။ အဲဒါနဲ့ဘဲ ကူပါကယ်ပါအုံးဆိုပြီး ဂူဂယ်မှာတယောက်ထဲခြေချင်းလိမ်နေတာ ခုထက်ထိမရသေးပါဘူး။ ကာမိုမီးလာတို့များ နည်းပညာပိုင်းမှာ အဲ့လောက်တော်တာနော်း)
ခုတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း(ကိုယ့်ဆီမှာတခါတလေစာရေးပေးဖို့ invite လုပ်ထားတဲ့သူ)ဆီကခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး သူ့အကောင့်နဲ့ စာရေးနေတာပါ။ ကျေးဇူးရှင်ကလဲတော်တော်နဲ့အကြောင်းမပြန်ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်ရက်တွေကပိုကြာသွားတယ်။ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကြိုသိပေမယ့်လဲ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတပါးကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ သူများဆီကခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး အတည်ပြုတော့မှဘဲလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်း)
ကိုယ့်တို့ဆီမှာခုတလောရာသီဥတုအရမ်းအေးပြီး နှင်းတွေလဲကျတယ်။ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ ၂၇ နှစ်အတွင်းမှာ အအေးဆုံးရာသီဥတုလို့ မီလန်က ဘဘတစ်ယောက်ကဆိုပါတယ်။ ရာသီဥတုကအေးတော့ ကိုယ်လဲအအေးမိပြီး ခေါင်းကိုက် နှာစေး ချောင်းဆိုး လည်ချောင်းနာ စကားပြောတာအသံကမထွက်နဲ့ တပတ်ကျော်ပြီ ခုထက်ထိမသက်သာသေးဘူး။ ဒီကြားထဲအစာအိမ်ကလဲ ကိုယ့်ကိုကလန်ကဆန်နဲ့ နဲနဲပုန်ကန်နေတယ်။ စိတ်တွေကလဲနောက်ကျိနေတော့ စာမရေးဖြစ်ပြန်ဘူး။
ပို့စ်အသစ်မျှော်နေတယ် ဆိုတဲ့ ညမငယ် မြတ်ကြည်နဲ့ ပုို့စ်အသစ်တင်တာမတွေ့လို့မေးတဲ့ ဘော်ဘော်(သောက်ဖော်သောက်ဖက်...... အဖန်ရေပြောပါတယ်းP) ကိုကျေးဇူးတင်စကားလေးလဲပြောပါရစေ။
နေသာမကောင်းတာ ဒီလောက်နှင်းကျပြီးအေးစက်နေတာတောင် ဓာတ်ပုံတော့ ရိုက်ဖြစ်အောင်ရိုက်လိုက်ပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့လိုနှင်းကျရင် Snow man လုပ်ချင်တာ အရမ်းအေးတော့ အပြင်မှာကြာကြာမနေနိုင်တာနဲ့မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး။
ကန္တာရနှင်းဆီ အဲလေ...မှားလို့...း)
ကိုယ်ကတော့ အဖွားနဲ့တူလို့လားမသိဘူး အချည်မစားနိုင်ဘူး။
စားရင်လဲဘယ်တော့မှာသွားနဲ့မဝါးဘူး ဒီအတိုင်းမြိုချတားP
လေကလဲခပ်ကြမ်းကြမ်းတိုက် နှင်းမိုးတွေကလဲရွာနဲ့ ထင်းရှူးပင်ကအကိုင်းတွေက
အသက်၇၀ကျော်အဖွားကြီးမောင်းတဲ့ အစိမ်းရင့်ရောင် BMW ကားဘေးနားကိုကျိုးကျတာ... တော်သေးတယ် ကားကိုမထိလို့
ဓာတ်ပုံထွက်ရိုက်ပြီး ၁၀မိနစ်လောက်နေတော့ နောက်ထပ်တစ်ကိုင်းထပ်ကျိုးကျသေးတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့ကံကောင်းလို့...း)
ဒီနေရာလေးမှာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း(ထုမနာ ထောင်းမနာ) တယောက်က တောင်းသျှိုးပန်သျှိုးနဲ့ သူ့အကြောင်းလေး ကိုယ့်ဘလော့လေးမှာကြေငြာပေးပါဆိုလို့ ကြေငြာလေးတစ်ချက်လောက်ဝင်ချင်ပါတယ်။ အသက်ကတော့ ကိုယ်နဲ့မတိမ်းမယိမ်းပေါ့။ ခြင်မ၊ ယင်မ(အမ)တောင်မသမ်းဖူးသေးတဲ့ လူပျိုလေးပါတဲ့။ တိရိစ္ဆာန်တွေတောင် အနားမကပ်တဲ့အဲ့ရုပ်... ကိုယ့်ဘာသာမှန်းကြည့်ပေတော့းP ( နီ့အလှည့်တုန်းက ကိုင်ပေါက်မယ်လေး ထုိုင်ခေါက်မယ်(ခေါင်းပြောတာပါ) လေးနဲ့ နာ့ကိုပြောထားတာ ဟွင်း ဟွင်း... ဘယ်ရမလဲ ခုတော့နာ့အလှည့်ကွ ) ဒါပေမယ့်စိတ်သဘောထားလေးတော့အရမ်းကောင်းပါတယ်။ တကယ်ပြောတာပါ။ အရပ်ကတော့ ၇၂လက်မတိတိ (ရေမရောပါတဲ့ရှင်)။ အလုပ်နှင့်အကိုင်နှင့် (ဂျလေဘီမဟုတ်ပေမယ့် အင်တာနက်မှာအသေကြူတဲ့သူပါး)) ဘိုးဘေးဘီဘင် ဆွေတော်ရှစ်သောင်းမျိုးတော်ပေါင်းပိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးလဲရှိပါသေးတယ်။ သူ့ဆီသွားလည်ရင် သူတို့လုပ်ငန်းပိုင်ထုတ်ကုန်လေးလဲလက်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့ ဆယ်ဘီးကားနဲ့တော့မလာနဲ့ပေါ့လို့ဆိုသေးပါတယ် ... အင်းလေ လေးဘီးကားလေးနဲ့ ဆယ်စီးလောက်ဘဲတန်းစီသွားလိုက်ပါမယ် နော့်...း)
မှတ်ချက် .. ပိုင်ရှင်ရှိပြီးသူများကိုမဆိုလိုပါ။ နီးစပ်ရာသို့လက်ဆင့်ကမ်းကြေငြာနုိုင်ပါသည်။
ကဲ.... ကြေငြာလုို့တော့ ပြီးပြီ အဲ့ဒါတောင်မှမစွန်သေးဘူးဆိုရင်
ဒီမှာ... တွေ့တယ်ဟုတ်! ဘာအကျီ င်္ချုပ်ပေးမယ်ဆိုတာ...
တာဇံအကျီ င်္ဝတ်ပြီးတောထဲသာသွားနေလိုက်တော့ ကိုတာဇံရေ...းP
အကယ်၍များ ကိုယ့်အကောင့်လေးပြန်သုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းဘလော့မှာဘဲစာဆက်ရေးဖြစ်မလားမသိဘူး။ (တကယ်လို့ သူငယ်ချင်းဘလော့မှာဘဲစာရေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လာရောက်အားပေးကြအုန်းနော် ) နောက်ထပ်ဘလော့အသစ်ထပ်လုပ်ရရင်လဲ တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်တော့မယ်။ ထပ်လဲလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ချစ်ခင်ရတဲ့ အစ်ကိုမောင်နှမတွေအကြံဥာဏ်လေးပေးကြပါအုံးလို့...။ ခုတော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ဘလော့က ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလုိုလို နဲ့ စိမ်းကားနေလိုက်တာများ လောလောဆယ်တော့ သူများနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှုရတာမမိုက်ပါဘူး။ အဟွတ်! အဟွတ်! ... ဆေးလိပ်နံ့တွေကလဲမွှန်လို့...းP
နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ ကိုအောင်(NYC) ဆဲဗင်းဒီဇင်ဘာ ရဲ့ ဘလော့မှာ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျေးဇူးပြုပြီး annoymous နဲ့ ကွန်မန့်ပေးလို့ရအောင်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ပို့စ်အသစ်တွေ ဖတ်ပြီးမန့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျန်တဲ့ဘလော့ဂ်တွေကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။
လာလည်ကြတဲ့ အစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံးကိုချစ်ခင်လေးစားလျက်....
Posted by ♠7comments: